जिन्दगी भरि नै धन कमाउन चाहनु हुन्छ ,भने यि ९ उपाय अपनाउनुहोस – Khabar PatrikaNp
जिन्दगी भरि नै धन कमाउन चाहनु हुन्छ ,भने यि ९ उपाय अपनाउनुहोस
July 31, 2020 279
२) जुन चिज तपाईं चहानुहुन्छ, त्यसको लिस्ट बनाउनुहोस । यस प्रकारले तपाईंको खर्च म्यानेज गर्न सहयोग पुग्छ ।३) क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छभने, आफ्नो बिलको ड्यु मिति भन्दा पछि तिर्नुहुन्छ भने यो आदतबाट बच्नुहोस । समयमा ड्यू तिर्नु र फजुुल खर्च गर्नबाट बच्नुहोस ।
Prev५९ करोडका मालिक सुशान्त राजपुतको नाममा अन्तरिक्षमा जग्गा,मूल्य सुनेरै उड्नेछ सबको होस….पुरा पढ्नुहोस .
Nextप्रेसर लो हुनुका कारण र यसका समाधान के के हुन ? पुरा पढ्नुहोस
पछिल्लो २४ घन्टामा देशभर १ हजार भन्दा बढी संक्रमित थपिए
पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन,भोलि मंसिर ०४ गते बिहिबार,यस्तो छ तपाईको राशिफल !